ब्लगबाट विशुद्ध पत्रकारिता गर्न ईच्छुकले पत्रकारिताबारे केही सामान्य जानकारी राख्दा राम्रो हुन्छ : स्मिता मगर - MeroReport
ब्लगबाट विशुद्ध पत्रकारिता गर्न ईच्छुकले पत्रकारिताबारे केही सामान्य जानकारी राख्दा राम्रो हुन्छ : स्मिता मगर
पुस्तक भने पछि भुतुक्कै हुन्छिन् स्मिता मगर । पेशाले पत्रकार स्मितालाई प्राकृतिक र मानविय सुन्दरताले निकै आर्कषित गर्छ । गाँउ र गाँउले जिवन मनपराउने स्मिता आफुलाई रोमान्टिक मानिस भन्न रुचाउँछिन् । लेख्न मनपराउने स्मिता ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छिन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै स्मिता मगरलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकनी :
ब्लगिङ किन सुरु गर्नुभयो ?
बोलेर भन्दा लेखेर म सजिलैसँग आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ ।
जब ब्लग भन्ने चिज हुन्छ भन्ने पत्तो भयो सुरु गरें ।
ब्लगबारे प्लस टु पढ्दा पत्रकारिता कक्षामा सुनेकी थिए । विशेष गरेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शक्ति आफ्नो हातमा लिएको समाचार अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन ब्लग प्रयोग भएको कुरोले मेरो ध्यान तानेको थियो ।
ब्लग मेरो लागि व्यक्तिगत विचार, भावना र चाहनाहरु कुनै रोकटोक बिना व्यक्त गर्ने ठाँउ हो । तोकिएका कुनै नियमहरु हुदैनन् अनि चलाउन सजिलो पनि लाग्छ ।
मेरो ब्लग कुनै विचारधारा या केही मिसनका लागि नभएर व्यक्तिगत भावना, अनुभवहरु पोख्न र मलाई मनपरेका अरुका लेख पनि कहिलेकाँही शेयर गर्न चलाएकोले यो विषय या त्यो विषय भन्ने छैन । धेरै जसो त मुड अनुसार नै लेखिन्छ र पोष्ट गरिन्छ । तर, फर्केर हेर्दा धेरै क्षेत्रलाई समेटेकि रहेछु – कविता, निबन्ध, नियात्रा, रिपोर्ट आदि इत्यादि ।
तपाईले http://smitazcorner.blogspot.in/ बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ ?
चलाई राखेकी छु । थप दुईवटा कालिङ र लनर्स । यी ब्लगहरु मेरा अरु दुई साथीहरुसँग एकअर्कालाई अभिव्यक्तिमा सहयोग गर्न भनेर सुरु गरिएका हुन् । तर, कामको व्यस्तताले केही समय यता थन्किएका छन् ।
आफ्नो अनुभवहरु मेरो लेखसँग मिल्छ भन्नुहुन्छ । खुशी लाग्छ ।
मेरो खेलकुद पत्रकार साथी राजु घिसिङसँग केही अभिव्यक्तिमा एकअर्कालाई सहयोग गरौं भनेर जोशिदैँ सुरु गरेको लनर्स नामक ब्लगमा खासै त्यति लेखिएन । त्यसले गर्दा राजुसँग धेरै समय मेरो बोलिचालि बन्द भयो । तर, जति धम्कि दिएपनि उसले लेखेको छैन । त्यसैले, उसको र मेरो कुराकानीमा ब्लग भन्ने शब्द ब्लक गरेका छौं ।
होइन भन्न मिल्दैन । यो कुरा तपाईले आफ्नो ब्लगलाई केको लागि, कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर, ब्लगबाट विशुद्ध पत्रकारिता गर्न ईच्छुकले पत्रकारिताबारे केही सामान्य जानकारी राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
मलाई नयाँ नयाँ विचारबारे जान्न या केही नयाँ कुरा सिक्न मन लाग्छ । प्रकृतिसँग नजिकाउने यात्रा गर्न मनलाग्छ, लामो समयको हाइकिङ या ट्रेकिङ । शिक्षाको क्षेत्रमा स्वयंसेविका भएर काम गर्न मन लाग्छ । पढ्ने अनि बृद्ध आमाबाबाहरुको ’हाम्रा पालामा...’ भन्दै सुरु हुने गफ सुन्न मनलाग्छ ।
धेरै नै छ । मेरो पेशागत कार्यभन्दा टाढा छ ब्लग । ब्लग पब्लिक भएपनि, इन्टरनेटले गर्दा कुनै बोर्डरको रोकतोक नलाग्ने अनि धेरै पाठकवर्गमा पुग्ने भएपनि मेरो लागि यो एकदमै व्यक्तिगत लाग्छ । मानौ, ब्लगमा मैले मेरो मन मष्तिष्कलाई नाङ्गो रुपमा राखेकी छु ।
Comment by bimal dhami on November 7, 2015 at 7:13pm
अति राम्रो ज्ञानको कुरो ब्लग गर्नु भएको छ धन्यवाद ।
Comment by Aayushma limbu on November 6, 2015 at 2:35pm
man paryo malai...